no mety ho tafiditra ao. Misy fisokafana ihany izany ny Filoha ankehitriny raha toa ka izay tokoa no tontosa. Na koa hoe tapidalan-kaleha ary tsy maintsy mampiditra ny « cerveau » avy amin’ny hafa. Ho fantatra tsy ho ela izany ary andrandrain’ny olona ny hametraka olona teknisiana kokoa fa tsy mpanao politika mpangalatra.
NITORY NY FIANAKAVIAN’IREO VOATIFITRY NY ZANDARY
Tafapetraka eo anivon’ny fampanoavana ao Toamasina ny fitorian’ny fianakavian’i Nomenjanahary Jeannot sy Gaston Cauchy. Izy ireo dia tanora mba nivoaboaka alina namonjy fety tao Ambolomadinika ary niady tamin’ny tanora hafa kinanjo maty notifirin’ny zandary. Vao vita ny fandevenana tany atsimo-atsinanana dia avy hatrany dia niverina namonjy an’i Toamasina ny fianakavian’ny maty ary nametraka ny fitoriana teny amn’ny fampanoavana. Tsy ho afa-maina ny zandary izay niasa tamin’io alina io raha ny fijery ny raharaha.
TEKNOLOJIA HANAMPY NY MPIZAHATANY
Tsy atahorana ho very intsony ireo mpizahatany manomboka izao ary efa manomboka mitodika any amin'ny fampiasana teknolojia ity sehatra ity. Noforonina ilay application izay antsoina hoe « The Real Madagascar » izay hanampy ireo mpizahatany hitady toerana, hanao famandrihana sy hijery izay tolotra ilainy. Manamora ny fiavian’izy ireo eto an-tanindrazana izany kanefa kosa amin’izao fotoanan’ny teknolojia izao dia tsy dia hoe zava-baovao be loatra intsony ny fisian’ny application. Kanefa dia natao fisehosehoana be omaly ny fampahafantarana azy.
TE HO MINISITRA
Mafy mihitsy izany hoe te-hahazo toerana ministra izany. Efa tafiakatra 400 amin'ireo famaliana tolotr’asa voaray eo amin'ny fiadidiana ny repoblika no mangataka ho ministra avokoa. Asa izay ho fanapahan-kevitra izay horaisin’ny Filoha fa dia ho henjankenjana ny fisafidianana izay ho minisitra ho avy eo. Hatreto dia samy mihetsika avokoa ny depiote, ny fikambanana politika isan-karazany ary koa ny olon-tsotra izay mba te-ho minisitra. Eo koa ireo minisitra efa teo aloha. Ady boaty tanteraka no misy ankehitriny. Efa fantatra anefa ny mpanapa-kevitra eto amin’ny firenena izay tsy voatery ho ny Filoha.